जापानिज फ्लु के हो? किन हुँदैन नेपालमा अनुसन्धान?
माघ ६, २०७४ शनिवार २२:४६:३१ प्रकाशित
जाडो मौसममा फ्लुका बिरामी बढ्दै गएको देखिन्छ। काठमाडौंमा कोही ओपिडी मार्फत त कोही भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। यो अरु केही हप्ता निरन्तर देखिनेछ। 'इन्फ्लुएन्जा भाइरस ए' अन्तर्गत स्वाइन फ्लु (एच-वान-एन-वान), हङकङ वा अस्ट्रेलियन फ्लु (एच-थ्रि-एन-टु), बर्ड फ्लु (एच-सेभेन-एन-नाइन) को बारेमा बढी सुन्ने गरेका छौं। तर, इन्फ्लुएन्जा भाइरस अन्तर्गत 'बी' र 'सी'को बारे कमैलाई थाहा हुन सक्छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरस 'ए'पछि 'बी' नै सबैभन्दा मानिसमा बढी देखा पर्ने गर्छ।
विश्व स्वस्थ्य संगठनको हालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने, इन्फ्लुएन्जा भाइरस बी को हिस्सा झन्डै ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यो बी भाइरसलाई दुई प्रजातिमा बाँडिएको छ, जसलाई यामागाता र भिक्टोरिया भनिन्छ। यसमा पनि यामागाता प्रजातिको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यही फ्लु बी भाइरस अन्तर्गत पर्ने यामागाता प्रजातिलाई जापानिज फ्लु पनि भन्ने गरिन्छ।
जापानिज फ्लु मानिसबाट मानिसमा सहजै सर्ने गर्छ। हाल नेपालमा फ्लु बी भाइरस देखिने क्रम बढ्दै गएको छ। अहिले टेकु अस्पतालको बहिरंग विभागम फ्लु प्रमाणित बिरामीमा फ्लु बी भाइरस बढी देखिएको छ। विश्व स्वस्थ्य संगठनको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल विश्वमा नै जापानिज फ्लु व्यापक फैलँदै गएको देखिएकाले नेपालमा पनि यसको उपस्थिति बलियो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, यसबारे नेपालमा हाल अनुसन्धान भएको छैन।
जापानिज फ्लु हाल बेलायत लगायत विश्वका विभिन्न देशमा प्रकोपका रुपमा फैलँदै गएको देखिन्छ। तसर्थ, विश्व स्वस्थ्य संगठनले सन् २०१८ को फ्लु खोपमा जापानिज फ्लुलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरस ए र बी का लक्षणहरुमा खासै ठूलो भिन्नता नहुने भए पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरस ए अली कडा र छिटोछिटो जीनमा परिवर्तन हुनेगर्छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरस बी तुलनात्मक रुपमा एभन्दा कम कडा र दुईदेखि तीन गुणाले कम जीनमा परिवर्तन हुनेगर्छ।
त्यस्तै फ्लु बीले बच्चालाई बढी संक्रमण गर्नेगर्छ। हात बारम्बार सफा गर्ने बनी नहुनाले बच्चाहरु छिटो संक्रमित हुनेगर्छन्। नेपालमा पनि इन्फ्लुएन्जा बीको अनुसन्धान गर्न सके फ्लु बीको कुन प्रजातिको खोप प्रयोग गर्ने भनेर निर्क्यौल गर्न सकिने थियो। विश्व स्वस्थ संगठनले जापानिज फ्लु खोपमा राख्न सल्लाह दिए पनि नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशमा कुन प्रजाति हाबी छ भनेर सल्लाह दिँदा अझ राम्रो हुनेथियो।
जापानिज फ्लुका लक्षण
१) उच्च ज्वरो,
२) टाउको दुख्ने,
३) नाकबाट पनि बग्ने वा हाच्छिउँ आउने,
४) खोकी लाग्ने,
५) जिउ आलश्य हुने, आदि।
हाल नेपालमा इन्फ्लुएन्जा बढ्दै गएकाले खासगरी दीर्घ रोगी, ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई विशेष सावधानीमा राख्नुपर्छ।